प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर गुड्नसक्ने इलेक्ट्रिक बाइक सार्वजनिक – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर गुड्नसक्ने इलेक्ट्रिक बाइक सार्वजनिक
प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर गुड्नसक्ने इलेक्ट्रिक बाइक सार्वजनिक
प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर गुड्नसक्ने इलेक्ट्रिक दुइटा बाइक सार्वजनिक भएको छ। भारतको कविरा मोविलिटीले दुइटा हाइस्पिड मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको हो। यो बाइकले इको मोडमा १२० किलोमिटर, सिटी मोडमा ९५ किलोमिटर र स्पोर्ट मोडमा ६० किलोमिटरसम्म माइलेज दिन्छ। त्यस्तै केएम ४०००मा ४.४ किलोवाट आवरको ब्याट्री दिइएको छ भने ८ किलोवार्टको मोटर दिइएको छ। यो बाइकले इको मोडमा १५० किलोमिटर, सिटी मोडका १ सय १० किलोमिटर र स्पोर्ट मोडमा ९० किलोमिटरसम्म माइलेज दिन्छ।
दुबै बाइकमा दुइटा चार्जिङ मोड दिइएको छ। इको मोडमा चार्ज गर्दा ६ घण्टा ३० मिनेट र बुस्ट चार्जरबाट दुइ घण्टामा फुल चार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनी केएम ३००० र केएम ४००० बजारमा ल्याएको भारतीय संचार माध्यम भास्करले लेखेको छ। यो भारतमा निर्मित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमध्ये सबैभन्दा धेरै रफ्तारमा गुड्ने कम्पनीको दावी छ।
केएम३०००का ४ किलोवाट आवरको ब्याट्री जडान गरिएको छ।
स्पिड कन्ट्रोलको लागि दुवै बाइकमा डिस्क ब्रेक पनि दिइएको छ। कम्पनीले फेब्रुअरी २० देखि यी मोटरसाइकल बिक्री सुरु गर्ने कम्पनीको भनाइ छ। पहिलो चरणमा यी बाइक दिल्ली, मुम्बई, अहमदावाद, बेङ्ग्लोर, हैदरावाद, पुणे, चेन्नाई, गोवा, र धारवाडबाट बिक्री हुनेछ। कम्पनीले भरतीय बजारमा केएम३००० को मूल्य १ लाख २६ हजार र केएम ४००० को मूल्य १ लाख ३६ हजार भारु निर्धारण गरेको छ। भविष्यमा कम्पनीले बाइकको रेन्ज बढाउँदै लैजाने कम्पनीका सिईओ जयविर एस सिवाचले बताए।
आजको सुनको भाउ , हेर्नुहोस् तोलाको कति ?
दुर्घटनामा आमाबुवा घाइते ८ वर्षका छोराको मृत्यु
भाकल के हो, के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ ?जानिराख्नुहोस !
प्र’तिकूल मौसमका कारण सैनिक विमान दु’र्घ’टना : १२ जनाको मृ’त्यु